Jawaabta lixdii su’aal ee uu xildhibaan Xidig weydiiyey madaxda joogta Kismaayo
May 18-keda, 2015-kii Baarlamaanka Federaalka ayaa ka dooday mooshin ay soo gudbiyeen ilaa 41 Xildhibaan oo ka dhan ah Baarlamaanka Jubbland iyo sida loo soo xulay, iyada oo xildhibaanadii mooshinka keeney ay sheegey in baarlamaanka uusan waafaqsanayn dastuurka Soomaaliya.
Barlamaanka Jubbaland ee markaas sharci darada lagu tilmaamayay waxay doorteen Madaxweynaha Jubbaland MD Axmed Madoobe.
Barlamaanka Federaalka oo ah hey’adda ugu sareeyso dalka Xildhibaanadii ka hor yimid 2015 waxaa ugu weynaa Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo hada ka mid ah shaqsiyaadka sheegtay Madaxweynanimada Jubbaland waliba go’aanka Barlamaanka waxaa uu ku tilmaamay xaaraan.
Qodobla 120aad ee daatuurka KMG ee dlaka wuxuu dowladaha xubnaha ka ah Fedraalka awood u siinayaa hogaaminta doorashooyin kooda heer deegaan waana qodobka Jubbaland cuskatay shalay (2015) iyo maanta (2019).
Garashadii Shalay aad ku difaacday Jubbaland iyo jiritaankeeda maanta halkee ka qaaday Xildhibaan Cabdirashiid?
Xidigoow waxaad xalaalaysay shalay maanta yaa xarimay mise aragtidaada waa la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan.
Maanta Jubbaland ma dantaadii baad ka waysay?
Taariikhdu waxay leedahay ma jirto cid wax xoogi karta shalay la isma xoogin (2015/2016) ee xal baa la keenay Jubbaland lagu dhisay waxaana ku mahadsan Hogaankii dalka ee xiligaasi Madaxweyne Xasan Sheekh oo gartay qatarta ka dhalanaysa is qabqabsiga oo ah ragaadinta horumarka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed.
Maanta lama xoogi karo doorashada soo aadan ee 2021 meel ku qoro taas cid walba oo isku daydaa way ku ceeboobaysaa insha allah qof walba oo aragtidaasi aaminsanna waa qof aan waaqici aheen kuna jiifa fakar ma dhaleys ah waayo 2015 markaad Jubbaland u sacab tumaysay yaa ku xoogay 2016 hadiiba aad aaminsan tahay in la is xoogi karo.
Jubbaland ma waxaad ka rabtay sida Laftagareen loogu xoogay koofurgalbeed in loogu xoogo qof Hogaanka Federaalku wataan la iskuna laayo mise waxaad rabtay waxa haatan ka socdo Galmudug ee la doonayo in lagu xoogo dadka deegaanka iyada oo la adeegsanaayo awooda iyo hantida Qaranka.
Dowladnimada waa sharci hadii aan xeerka noo dhigan la dhowrin lama kale xoog badna.
Marin habaabin yaanan xoog laga dayin xalku waa wadajir iyo is xurmeeyn cidna lama xoogi karo Soomaali waa isi soo tijaabisay.